Posted by ငွေလမင်း at 11:13 AM
ပျောက်နေပါတယ် အောက်မေ့တာ ဒင်းက ခရီးထွက်သွားသကိုး
ခရီးသွားတာတောင် အကြောင်းမကြား ဘာမကြားနဲ့။
စိတ်ဆိုးလိုက်တာ။ မဒမ်ငွေလဲ မောင်မောင်ငွေမရှိတော့ ဘလော့တောင် မလည်ဘူးထင်ပါ့ ရောက်မလာဘူး။ ၂ယောက်သား ပျောက်ချက်ကောင်းနေတော့ ခိုးရာလိုက်ပြေးကြတယ်ထင်တာ ။ အိမ်မှာနေရတာ ပျင်းလို့ အပျော်ခိုးပြေးတမ်းဆော့တယ် ထင်တာလေ။
မောင်ငွေ အိမ်မှာ မရှိလို့ထင်ပါ့ ရန်ဖြစ်သံမကြားရဘဲ ၂ယောက်သားတိတ်ဆိတ်နေကြတာ။
ကဲ စာပြန်ရေးတော့မယ်လို့ အားကြိုးမာန်တက် ပြောလာတဲ့အတွက် ၀မ်းမြောက်ပါတယ်. ရေးပါ ရေးပါ။ အများကြီးရေးနိုင်ပါစေ။
နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ် ဆိုတာ ရွာမှာတုန်းက အလှုခံလှည့်ရင်သာ မြင်ဖူးတော့ ဒါကြီးမျိုးပဲ မှတ်တာ..
လက်စသတ်တော့ ငွေလမင်းနှစ်ယောက်ဆိုတာလဲ ဒါညိုးကြီးကိုး... အဟတ်ဟတ်
မစ္စတာငွေ ခီးထွက်တယ်ဆိုတာနဲ့ မဒမ်ငွေက စာတောင် လိုက်မဖတ်တော့ဘူး အံ့တယ်.
သြ . . . ဂလိုကိုး။
ဖတ်ချင်စရာလေးတွေကို စောင့်မျှော်နေပါတယ် ဗျာ